Kuchengetedza kwekukatanura uye kuungana kwemishonga yemagetsi michina
I. zvemaziso disassembly
Kugadzirira usati wabvarura
A. iyo inoshanda nzvimbo inofanira kunge yakakura, yakajeka, inotsvedzerera uye yakachena.
B. Midziyo yekukatanura yakagadzirirwa zvizere nematanho akakodzera.
C. Gadzirira sitendi, uchiganhura bheseni uye dhiramu remafuta pazvinangwa zvakasiyana
Nheyo dzekutanga dzekugadzira disassembly
Maererano nemuenzaniso uye data rakakodzera, hunhu hwehukama uye hukama hweungano yemuenzaniso hunogona kunyatsonzwisiswa, uye ipapo nzira nematanho ekuputsika nekukatanura zvinogona kusarudzwa.
B. Sarudza maturusi nemidziyo nenzira kwayo. Kana kuora kuchinetsa, tsvaga chinokonzeresa pakutanga uye tora matanho akakodzera ekugadzirisa dambudziko.
C. Kana uchibvarura zvikamu kana magungano ane madhairekitori uye mamaki, madhairekisheni uye mamaki anofanirwa kuchengetwa mupfungwa. Kana mamaki arasika, anofanirwa kumakwa zvakare.
D. Kuti tidzivise kukuvara kana kurasikirwa kwezvikamu zvakabviswa, zvinofanirwa kuchengetwa zvakasiyana zvichienderana nehukuru uye kunyatsoita kwezvikamu, uye zvichaiswa muhurongwa hwekukatanura. Mativi akajeka uye akakosha anofanirwa kuchengetwa nekuchengetwa.
E. Mabhaudhi akabviswa uye nzungu dzinofanira kudzoserwa munzvimbo dzisingakanganise kugadzirisa, kuitira kudzivirira kurasikirwa uye kufambisa gungano.
F. Disassemble sezvinodiwa. Kune avo vasina kukatanura, vanogona kutongwa kunge vari muchimiro chakanaka. Asi kudiwa kwekubvisa zvikamu kunofanirwa kubviswa, kwete kuchengetedza dambudziko uye kushaya hanya, zvichikonzera kugadziriswa kwemhando hakugone kuvimbiswa.
(1) yeiyo kubatana kunonetsa kusunungura kana kudzikisira mhando yehukama uye kukuvadza chikamu chemubatanidzwa zvikamu mushure mekukatanura, kubvisa disassembly kunodzivirirwa kusvika pazvinogoneka, sekuvhara kubatana, kupindirana kubatana, riveting uye kuwacha kubatana , nezvimwe.
(2) kana uchimanikidza pachikamu nenzira yekurova, iyo yakapfava liner kana sando kana chibhakera chakagadzirwa nezvinhu zvakapfava (zvakaita semhangura yakachena) zvinofanirwa kuve zvakapeteredzwa kuitira kudzivirira kukuvara kumeso kwechikamu.
(3) simba rakakodzera rinofanira kuiswa panguva yekukatanura, uye kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kuchengetedza zvinhu zvikuru kubva kukuvara kupi nekupi. Kune izvo zviviri zvikamu zvemutambo, kana zvichidikanwa kukuvadza chikamu, zvinodikanwa kuchengetedza zvikamu zvemutengo wepamusoro, kugadzira matambudziko kana mhando iri nani.
(4) zvikamu zvakareba kureba uye dhayamita, senge chaiyo yakatetepa shaft, sikuruu, nezvimwewo, zvinonatswa, kuzorwa mafuta uye kunorembera zvichidzika zvichinge zvabviswa. Zvinorema zvikamu zvinogona kutsigirwa neakawanda fulcrum kudzivirira deformation.
(5) zvikamu zvakabviswa zvinofanirwa kucheneswa nekukurumidza sezvazvinogona uye zvakaputirwa nemafuta ekurwisa ngura. Kune chaiwo zvikamu, asi zvakare bepa remafuta rakaputirwa, kudzivirira ngura kana kurovera pamusoro. Zvimwe zvikamu zvinofanirwa kurongwa nezvidimbu, zvobva zvaiswa mushure mekumaka.
(6) bvisa zvidimbu zvidiki uye zviri nyore kurasika, zvakadai setu screws, nzungu, washer nemapini, nezvimwewo, wozozviisa pazvikamu zvikuru sezvazvinogona mushure mekuchenesa kudzivirira kurasikirwa. Mushure mekubviswa kwezvikamu zviri mugodhi, zvakanakisa kuzviisa kumashure kune shaft muchimiro chepakutanga kana kuzviisa patambo netambo yesimbi, izvo zvinounza mukana wakanaka pabasa rekereke mune ramangwana.
(7) bvisa rukoronga, kapu yemafuta uye mamwe mafuta ekuzora kana kutonhora, mvura negasi, ese marudzi emagetsi zvikamu, mushure mekuchenesa inofanirwa kunge iri yekuisa kunze uye yekuisa kunze chisimbiso, kuitira kudzivirira guruva nekusviba kwakanyudzwa.
(8) painobvarura chikamu chinotenderera, iyo yekutanga balance nyika haizovhiringidzwe sezvazvinogona.
(9) yezvikamu zvechikamu izvo zvinowanzo shanduka uye zvisina chinzvimbo chekumisikidza kana maficha, anozomakwa mushure mekukatanura kuitira kuti zvionekwe zviri nyore panguva yegungano
Ii. Mechanical gungano
Mechiniki gungano maitiro chinhu chakakosha chinongedzo chekuona mhando yekugadziriswa kwemishini, saka inofanirwa kuve iri:
(1) zvikamu zvakaunganidzwa zvinofanirwa kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi, uye chero zvikamu zvisina kukwana hazvigone kuunganidzwa. Ichi chikamu chinofanira kupfuura kuomarara kuongororwa pamberi pegungano.
(2) iyo chaiyo inowirirana nzira inofanirwa kusarudzwa kuzadzikisa izvo zvinodiwa zvekuenderana kwakaringana. Mechiniki kugadzirisa kwehuwandu hwakawanda hwebasa kudzoreredza kuenzanisa kwakaringana kweyakaenzana kukodzera, inogona kutorwa kuzadzikisa zvinodikanwa zvekusarudzwa, kugadzirisa, kugadzirisa uye dzimwe nzira. Mhedzisiro yekuwedzera kwekushisa inofanirwa kutariswa pamukana wakakodzera. Kune akakwana zvikamu zvinoumbwa nemidziyo ine akasiyana ekuwedzera coefficients, kana ambient tembiricha panguva yegungano inosiyana zvakanyanya kubva kune tembiricha panguva yekushanda, mutsauko shanduko unokonzerwa neizvi unofanirwa kuripwa.
(3) ongorora uye woongorora kurongeka kwegungano dhizaini cheni, wosangana nezvakakodzera zvinodiwa kuburikidza nesarudzo uye nekugadzirisa.
(4) yekuita neyegungano odhiyo yemuchina zvikamu, chirevo ndechekuti: kutanga mukati uye ipapo kunze, kutanga kwakaoma uyezve kuri nyore, kutanga kunyatsoita uyezve kwese.
(5) sarudza yakakodzera magungano nzira uye gungano michina uye maturusi.
(6) teerera kune zvikamu zvekuchenesa uye lubrication. Izvo zvakaunganidzwa zvikamu zvinofanirwa kucheneswa zvakakwana kutanga, uye zvikamu zvinofamba zvinofanirwa kuvezwa nemafuta akachena pane inoenderana nzvimbo inofamba.
(7) teerera pakuiswa chisimbiso mugungano kudzivirira "kuvuza katatu". Kuti ushandise yakatarwa yekuisa chisimbiso chimiro uye yekuisa chisimbiso zvinhu, haigone kushandisa zvinomiririra zvinotsiva. Teerera kune hunhu uye hutsanana hwechisimbiso chepamusoro. Teerera kune nzira yegungano yezvisimbiso uye kuomarara kwegungano, nekuti zvimisikidzwa zvimire zvinogona kushandisa chisimbiso chakakodzera.
(8) teerera kune zvinodiwa negungano rekukiya mudziyo uye uteedzere nemitemo yekuchengetedza.
Iii. Nyaya dzinoda kutariswa mumakaniki chisimbiso disassembly uye gungano
Mechiniki chisimbiso ndeimwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekushandura chisimbiso chemuviri, iko kugadzirisa kwayo kwakaringana kwakanyanya, kunyanya simba, rinomira mhete, kana iyo disassembly nzira isina kukodzera kana kushandiswa zvisirizvo, gungano rechisimbiso remagetsi haringokundikani chete kuzadzisa chinangwa chekuisa chisimbiso, uye kunokuvadza zvakaunganidzwa zvekuisa chisimbiso.
1. Kuchengetedza panguva yekukatanura
1) kana uchibvisa chisimbiso chinogadzirwa, zvinorambidzwa zvachose kushandisa sando nefoshoro yakatetepa kudzivirira kukuvadza chisimbiso.
2) kana paine michina zvisimbiso kumagumo ese epombi, iwe unofanirwa kuve wakangwarira mukuita kwekukatanura kudzivirira imwe kubva pakurasikirwa neimwe.
3) yesimbi yemuchina yakashanda, kana iyo yekuisa chisimbiso ichifamba kana gland rikasununguka, rotor uye stator mhete zvikamu zvinofanirwa kutsiviwa, uye hazvifanirwe kushandiswa zvakare mushure mekusimbisa. Nekuti mushure mekusunungura, iyo yekutanga inomhanya track yeiyo kukakavara vaviri ichachinja, kuiswa chisimbiso kwenzvimbo yekubatana kuchaparadzwa nyore.
4) kana iyo yekuisa chisimbiso yakasungwa nevhu kana condensate, bvisa iyo condensate usati wabvisa iyo mechanical chisimbiso.
2. Kuchengetedza panguva yekuiswa
1) isati yaiswa, zvinodikanwa kuti unyatso tarisa kana huwandu hwesangano rekusimbisa zvikamu zvakakwana uye kuti izvo zvinhu zvakakanganisika here, kunyanya kana paine chero hurema hwakadai sekurovera, kutsemuka uye deformation mune ine simba uye static mhete. Kana paine chero dambudziko, gadzirisa kana kutsiva nezvipenga zvikamu.
2) tarisa kana iyo chamfering Angle yesleeve kana gland iri yakakodzera, uye kana ikasasangana nezvinodiwa, inofanirwa kudimburwa.
3) zvese zvinoriumba zvechimakanika chisimbiso uye yavo inosangana gungano kusangana nzvimbo inofanirwa kucheneswa neacetone kana isina anhydrous doro usati waiswa. Ichengete yakachena panguva yekumisikidza, kunyanya iyo inofambiswa uye inomira mhete uye zvekubatsira zvekuisa chisimbiso zvinofanirwa kunge zvisina tsvina uye guruva. Isa rukoko rwakachena rwemafuta kana turbine oiri pamusoro peanofamba uye akamira mhete.
4) iyo yekumusoro gland inofanira kusimbiswa mushure mekubatana kwekubatana. Mabhaudhi anofanira kunge akasungwa zvakaenzana kuti kudzivirira chikamu chegland. Tarisa poindi yega yega ne feeler kana yakakosha chishandiso. Iko kukanganisa hakufanirwe kuve kwakakura kupfuura 0.05mm.
5) tarisa inoenderana clearance (uye concentricity) pakati gland uye yekunze dhayamita ye shaft kana shaft sleeve, uye chengetedza kufanana kwese, uye tarisa kushivirira kwese poindi nepulagi isiri inopfuura 0.10mm.
6) iyo yekumanikidza yekumanikidza huwandu ichaitwa zvinoenderana nezvakapihwa. Hazvibvumirwi kuve zvakakurisa kana kushoma. Iko kukanganisa kuri ± 2.00mm. Zvidiki kwazvo zvinokonzeresa kumanikidza kumanikidza uye haikwanise kutamba chinwiwa chekuisa chisimbiso, mushure mekunge chitubu chaiswa muchitsime chechitubu kufamba zvinoshanduka. Paunenge uchishandisa tsime rimwe chete, teerera kune kutenderera kunongedzera kwechirimo. Iko kutenderera kwekutenderera kwechitubu kunofanirwa kuve kwakanangana nekwaitenderera kunongedzera kweshaft.
7) rin'i inotakurika inochengetwa inochinjika mushure mekumisikidzwa. Ichakwanisa otomatiki kudzosera kumashure mushure mekutsikirira rin'i inofamba kusvika kuchitubu.
8) tanga waisa iyo yekumira mhete yekuisa chisimbiso mhete kumashure kweiyo yakamira mhete, wozoiisa mune yekuvhara chisimbiso kumagumo. Teerera kuchengetedzwa kwechikamu chein'i yemhete, kuve nechokwadi chekumira kwechikamu cheinamira uye nechepakati mutsetse wevhavha yekupedzisira, uye kumashure kweiyo static mhete anti-swivel groove inowirirana neinopfuurisa-pini, asi ita usavaite kuti vataurirane.
9) mune yekumisikidza maitiro, hazvitombobvumidzwa kugogodza zvakananga chinhu chekuisa chisimbiso nematurusi. Kana zvichikosha kugogodza, maturusi akakosha anofanirwa kushandiswa kugogodza chinhu chekuisa chisimbiso kana zvikaitika.